AGT စင်မြင့်ထက်မှာ ဒိုင်တွေကို အံ့သြတကြီး ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်အရွယ် ချာတိတ်မလေး
On June 18, 2018 June 18, 2018 By Aminnyar
အဲဒီနေ့က America’s Got Talent ပြိုင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့ ခမ်းခမ်းနားနား ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စင်မြင့်ကြီးထက်ကို ချာတိတ်မလေးတစ်ယောက်ဟာ စိုးရွံ့နေတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ အစဉ်အလာကြီးသလောက် သြဇာတွေ၊ အရှိန်အဝါတွေ ကြီးမားလှတဲ့ ဒိုင်တွေရဲ့ရှေ့မှောက်က စင်မြင့်ထက်မှာ ခြေစုံရပ်နေခဲ့တဲ့ သူမပုံစံလေးဟာ စိုးရွံ့အားငယ်နေဟန်ပေါ်လွင်နေခဲ့သလို၊ သွင်ပြင်လေးကလည်း အခြယ်အသကင်း၊ ရိုးရှင်းစွာနဲ့ ဆံပင်ရှည်ရှည် ပိန်ပိန်ပါးပါးလေးပါပဲ။
ဒိုင်တွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Mel B က ချာတိတ်မလေးကို ချစ်စနိုးဖြစ်နေဟန်နဲ့ မေးခွန်းတချို့မေးတယ်။ Mel B ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို သူမက ရှက်ကိုးရှက်ကန်း အပြုံးလေးတွေကိုပြုံးရင်း မပွင့်တပွင့် လေသံလေးနဲ့ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ “ သမီးနာမည်ကတော့ Courtney Hadwin ပါ၊ အသက်ကတော့ ၁၃ နှစ်ပဲ ရှိသေးပါတယ်၊ လောလောဆယ်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားနေရပါတယ်။ ကျောင်းမှာတော့ ဂီတနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ ”…. တဲ့။
ဒါပေမဲ့ Mel B က… “ စင်ပေါ်ရောက်ရင် ဘယ်သူမဆို စိတ်လှုပ်ရှားကြမှာပဲ။ ဆိုစရာရှိတာကိုသာ ဆိုပြပါ ” … လို့ ခပ်ပြုံပြုံးနဲ့ အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ဒိုင်သုံးယောက်ကလည်း ချာတိတ်မလေး ဘယ်လို ယှဉ်ပြိုင်လာမလဲ ဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားဟန်တွေနဲ့ တိတ်တဆိတ် စောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြတယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ ချာတိတ်မလေးရဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ စင်နောက်ဘက်ကိုရောက်အောင် နည်းနည်းဆုတ်သွားပြီးတော့ ခြေကိုခွဲလို့ ခေါင်းလေးငုံ့ကာရပ်ရင်း Intro တီးလုံး အဝင်ကို စောင့်တယ်။ အဲဒီအချိန်ခဏလေးမှာ ပရိသတ်တွေရော၊ ဒိုင်တွေရော၊ ခန်းမကြီးတစ်ခုလုံးရော တဒင်္ဂမျှ တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
စင်ရဲ့ဘေးဘက် အတွင်းထောင့်တစ်နေရာကနေ စောင့်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ ချာတိတ်မလေးရဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူဟာလည်း သမီးလေးအတွက် ရင်တွေခုန်လို့ စိတ်တွေ လှုပ်ရှားနေခဲ့ရင်း စိုးရိမ်တကြီး ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ စကားနည်းသလောက် ရှက်လည်း ရှက်တတ်တာမို့ သူငယ်ချင်းတွေဘာတွေ သိပ်မရှိတဲ့အတွက် သီချင်းတွေကိုသာ အဖော်လုပ်နေရတဲ့ သမီးလေး၊ အဆင်ပြေပါစေ… ဆိုတဲ့ ဆုတောင်းကိုသာ ရင်ထဲမှာ ပဲ့တင်ထပ်နေအောင် ရေရွတ်နေမိတယ်။
Intro တီးလုံးအဝင်ကို ခေါင်းငုံ့စောင့်နေရတဲ့ ချာတိတ်မလေးရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်း ရင်ခုန်နှုန်းတွေ မြင့်သထက် မြင့်တက်လာရသလိုပါပဲ။ ခဏတွင်းချင်းမှာပဲ သူမသီဆိုယှဉ်ပြိုင်မယ့် Otis Redding ရဲ့ Hard To Handle ဆိုတဲ့ သီချင်းက Intro တီးလုံးသံကို အားလုံး ကြားလိုက်ရတယ်။ အဲဒီမှာ Intro တီးလုံးသံနဲ့အတူ ချာတိတ်မလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်း ထူးထူးခြားခြား လှုပ်ရှားမှုဟန်ပန်တွေနဲ့ လှုပ်ခါလာတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် အားလုံးမျှော်လင့်မထားတဲ့ ဟန်ပန်မျိုး။ ဆံပင်ရှည်လေးတွေဟာလည်း လေထဲမှာ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ဝဲပျံလာပြီးနောက်… Intro တီးလုံးသံအဆုံးမှာ ချာတိတ်မလေးဟာ သီချင်းကို စဆိုတယ်။ သွားသေးသေးလေးတွေရှိတဲ့ သူ့ပါးစပ်သေးသေးလေးက တကယ့်ကို အောင်မြင်ခန့်ညားတဲ့ Rocker သံမျိုးကြီး ထွက်လာတဲ့အခါမှာ ဒိုင်တွေဟာ တအံ့တသြ ဖြစ်သွားကြရင်း ပရိသတ်တွေဟာလည်း ဝေါခနဲဖြစ်သွားကြပါတော့တယ်။ သီချင်းတစ်ပိုဒ် မဆုံးခင်မှာဘဲ ပရိသတ်တွေဟာ ကိုယ်စီ မတ်တပ်ထရပ်ပြီး ချာတိတ်မလေးကို အားပေးနေခဲ့ကြပြီ။
ချာတိတ်မလေးဟာလည်း ဂီတနတ်ဘုရားရဲ့ ဖမ်းစားမှုအောက်မှာ စောစောက မဝံ့မရဲဟန်ပန်တွေ၊ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းအပြုံးနဲ့ မပွင့်တပွင့်လေသံတွေ အကုန်လွင့်စင် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီ။ တစ်ကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့သွေးတွေ ပွက်ပွက်ဆူလာခဲ့ပြီး အကြောက်အလန့်ကင်းကင်း၊ ဟန်ပန်အမူအရာ ကောင်းကောင်း၊ အသံအနိမ့်အမြင့် အဖြတ်အတောက် အဆွဲအငင်ကောင်းကောင်းနဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်ရင်း America’s Got Talent စင်မြင့်ကြီးကို သိမ်းပိုက်စပြုလာခဲ့ပါတယ်။
ချာတိတ်မလေးရဲ့ သီဆိုယှဉ်ပြိုင်မှုအဆုံးမှာတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ လက်ခုပ်တီးအားပေးသံတွေဟာ ခန်းမကြီးတစ်ခုလုံး ပွင့်ထွက်သွားတော့မလားလို့ ထင်ရလောက်အောင် ဟိန်းညံသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒိုင်လေးယောက်စလုံးဟာလည်း ထိုင်မနေနိုင်တော့ဘဲ ကိုယ်စီမတ်တပ်ထရပ်ကာ အားပါးတရ လက်ခုပ်တီးခဲ့ကြရတော့တယ်။ ဒိုင်လေးယောက်ထဲမှာ နာမည်ကြီးသလောက် သြဇာလည်းကြီးတဲ့ Simon Cowell ဟာ နှုတ်ဆိတ်မနေမနိုင်တော့တဲ့ဟန်နဲ့ ပြောခဲ့ပါတော့တယ်။
“ ရူးချင်စရာပဲ Courtney ရေ။ ညည်းလိုရှက်တတ်တဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဆီကနေ ခြင်္သေ့လေးတစ်ကောင် ဟိန်းဟောက်နေသလို အသံမျိုးထွက်လာတာ တကယ့်ကို မယုံကြည်နိုင်စရာပါပဲ။ ငါပြောချင်တာက မယုံနိုင်လောက်အောင် တကယ်ကောင်းတယ်လို့ပါ ”
နောက်ထပ် ဒိုင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Howie Mandle ကတော့ ချာတိတ်မလေးကို ဇာတ်လမ်းတိုလေးတစ်ပုဒ် ပြောပြတယ်။ Monterey Pop Fastival ပွဲမှာ အဆိုကောင်းသူ Janice Joplin ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ Clive Davis ရဲ့ အကြောင်းလေးပါ။ အဲဒီအကြောင်းလေးကို ပြောပြပြီးတဲ့နောက်မှာ Howie Mandle ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားဟန်နဲ့…. “ငါကတော့ Clive Davis မဟုတ်ပါဘူး။ ငါက Howie Mandle ပါ။ ညည်းလေးအတွက် ငါလုပ်ပေးနိုင်တာ တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ ငါပေးမှာက”… လို့ပြောပြီး သူတို့စားပွဲပေါ်မှာရှိတဲ့ ရွှေရောင်ခလုတ်ကို ဖြုန်းခနဲ နှိပ်ထည့်လိုက်တော့တာပါပဲ။
အဲဒီအခါမှာ နဂိုပုံစံ ရှက်ကြောက်သလိုလေး ပြန်ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ စင်ပေါ်က ချာတိတ်မလေးဟာ ဆူညံတဲ့ အားပေးသံတွေကြားမှာ သူကြုံနေရတဲ့အဖြစ်ကို ရင်မဆိုင်ရဲဟန်နဲ့ မျက်နှာကို လက်ဖဝါးတွေအုပ်ပြီး စတင် ငိုကြွေးပါတော့တယ်။ နောက်… မျက်နှာပေါ်က လက်ဖဝါးတွေကို ပြန်အဖယ်မှာ အပေါ်ကနေ မိုးတွေရွာသလို တဖွဲဖွဲ ကျဆင်းနေတဲ့ ရွှေရောင်စက္ကူအပိုင်းအစလေးတွေကို မြင်လိုက်ရပြန်တယ်။ ဒါတွေဟာ… ဒါတွေဟာ… သူမအတွက်တဲ့လား။
May never stop crying after @courtneyhadwin's #GoldenBuzzer moment tonight. #AGT
A post shared by America's Got Talent – AGT (@agt) on Jun 12, 2018 at 6:57pm PDT
ချာတိတ်မလေးဟာ မျက်ရည်တွေပြည့်နေတဲ့ မျက်နှာလေးနဲ့ မယုံနိုင်သေးသလို ငေးမော့ကြည့်နေခဲ့လေတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စင်ဘေးကနေ ရပ်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ ဖခင်ဟာ စင်ပေါ်ပြေးတက်လာခဲ့ပြီး သားအဖ နှစ်ယောက်ဟာ စင်ပေါ်မှာ ခပ်တင်းတင်း ပွေ့ဖက်လို့နေခဲ့ကြတော့တယ်။
၀မ်းသာမျက်ရည်တွေဟာ သူတို့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာ စိုရွှဲ ခိုတွဲလို့။
ရွှေရောင်စက္ကူစလေးတွေဟာလည်း သူတို့အပေါ်ကို တဖွဲဖွဲ တလွင့်လွင့်နဲ့ ကျဆင်းလို့။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးသံတွေဟာလည်း တသောသော ညံလို့။
တကယ်တော့ Courtney Hadwin ဟာ အရင်ကလည်း The Voice Kids UK ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ပြိုင်ခဲ့ဖူးပြီး အဲဒီပွဲမှာ နောက်ဆုံးအဆင့်အထိ အရွေးခံခဲ့ရသေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခု ဒီပွဲမှာတော့ သူမဟာ အောင်မြင်သွားခဲ့ရပါပြီ။ “စာအုပ်တစ်အုပ်ကို အဖုံးပဲကြည့်ပြီး အတွင်းမှာ ဘာတွေရေးထားသလဲဆိုတာ အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်လို့ မရနိုင်ဘူး” ဒီသဘောတရားက မှန်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို America’s Got Talent စင်မြင့်ကြီးထက်မှာ ယှဉ်ပြိုင်သွားခဲ့တဲ့ ၁၃ နှစ်အရွယ် ချာတိတ်မလေး Courtney Hadwin က ထပ်မံသက်သေပြသွားခဲ့သလို ဖြစ်နေခဲ့လေတော့တာ။ ဒါကို ဘယ်သူမှ ငြင်းဆန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မထင်မိတော့ပါဘူး။ ။
Music NewsAmerica's Got Talent
PREVIOUS POST Previous post: ၁၅ စက္ကန့်စာ MTV အသစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Nicki Minaj နဲ့ Ariana Grande
NEXT POST Next post: လက်ဖျံရိုးပေါ်က ချစ်သူဟောင်းရဲ့ Tattoo ပုံကို ပုံစံပြောင်းပစ်လိုက်တဲ့ Pete Davidson